မက်သာဖီတမင်းရှာဖွေခြင်းနှင့် ၀ ယ်လိုအားကိုလျှော့ချရန်နျူကလိယမှအောက်စီတိုစီယင့်လုပ်ဆောင်မှုသည် (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အဆိပ်ရှိသည်။
နျူကလိယ Accumbens အတွက် oxytocin တမန်တော်သမ်ဖက်တမင်းရှာခြင်းနှင့်ဝယ်လိုအား Attenuate မှ (2016)
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2016 ဒီဇင်ဘာ 1 ။ pii: S0006-3223 (16) 33055-4 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2016.11.011 ။
ကော့ BM1, Bentzley BS2, ရုပ်ပျို-Tuero H ကို2, RE ကိုကြည့်ပါ3, Reichel CM2, Aston-ဂျုံးစ်, G4.
အထောက်အထားကြောင်း oxytocin, ကောင်းစွာလူမှုရေးအပြုအမူတွေအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုလူသိများတစ်ခု endogenous peptide, ကလေးမွေးဖွားနှင့်နို့ညွှန်ပြတဲ့အလားအလာစွဲ pharmacotherapy ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ကြွဆေး (meth) စွဲလမ်းများအတွက် pharmacotherapy အဖြစ် oxytocin ဆနျးစစျဖို့ကြွက်များတွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (BE) အတွင်း-session ကိုအပြုအမူဆိုင်ရာစီးပွားရေးတစ်ဦးအလုပ်။ အဆိုပါ BE ပါရာဒိုင်းစွဲနှင့်အတူလူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုလုပျထုံးလုပျနညျးအပြီးလုပ်ပါတယ်ခဲ့သည်။ မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးအကဲဖြတ်အတူတူ BE variable တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာ relapse အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် preclinical BE လေ့လာမှုဘာသာပြန်အလားအလာအထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့သည်။
ကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီး စနစ်တကျနှင့် microinfused oxytocin ၏ဆိုးကျိုးများ တစ်ဦး BE ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ရှာကြံငွိမျး meth ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသွေးကြောသွင်း meth နှင့် reinstatement ဝယ်လိုအားပေါ်မှာ။ ရှာကြံ meth ဝယ်လိုအားနှင့် meth အကြားဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသမီးကြွက်အထီးကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ meth အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ဝယ်လိုအား (ဆိုလိုသည်မှာ, လှုံ့ဆျောမှု) ပြသခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်, meth ဝယ်လိုအား, meth ရှာ၏ reinstatement ဟောကိန်းထုတ် နှင့်စနစ်တကျ oxytocin meth ရှာဖို့ meth နှင့် attenuation reinstatement ဝယ်လိုအားလျော့နည်းသွားသည်။ oxytocin meth ဝယ်လိုအားလျော့ကျလာခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့အအင်အားအကောင်းဆုံးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူကြွက်များတွင်ရှာကြံမှာထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စနစ်တကျ oxytocin ဤသက်ရောက်မှုများနျူကလိယ accumbens အတွက်လုပ်ရပ်များကကမကထပြုခဲ့ခဲ့ကြသည်။
oxytocin meth ဝယ်လိုအားနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်ရှာကြံလျော့ကျ, ဤသက်ရောက်မှုများနျူကလိယ accumbens အတွက် oxytocin အချက်ပြပေါ်မူတည်သည်။ ယေဘုယျအားဤဒေတာ oxytocin-based ကုထုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလူသားတွေအတွက် meth စွဲများအတွက်အလားအလာကုသမှုချဉ်းကပ်မှုဖြစ်မည်အကြောင်းဖော်ပြသည်။
စွဲ; အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒ; စိတ်ကြွဆေး; oxytocin; Reinstatement; self-အုပ်ချုပ်ရေး
Doi: 10.1016 / j.biopsych.2016.11.011